बेलायतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले सोमवारदेखि आफ्नो पदबहाली गरेका छन् । हालै ४ वर्षे कार्यकाल सकेर नेपाल फर्केका निवर्तमान राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीका ठाउँमा आएका रेग्मी संयुक्त अधिराज्यका लागि २१ औं राजदूत हुन् । रेग्मी सन् १९९५ मा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरी सन् २००२ मा वन मन्त्रालयमा उपसचिव, सन् २००६ मा अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव, सन् २०१४ मा भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिव र सन् २०१७ मा मुख्यसचिव भएका थिए । सोमवार मात्र लण्डन आइपुगेका रेग्मीले सोही दिन नै कार्यभार सम्हालेका हुन् । ...
लन्डन । नेपालबाट १९८० देखि १९९० को दशकमा हराएका प्राचीन मूर्तिमध्येका दुई मूर्ति बेलायत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाली दूतावास लण्डनमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहबीच बेलायत प्रहरीका तर्फबाट यहाँस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई उक्त मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको हो । सोह्रौँ शताब्दीमा काठमा कुँदिएको कलात्मक तोरणको मूर्ति काठमाडौँको हनुमानढोका कुमारी बहालबाट हराएको थियो […] The post नेपालबाट हराएका दुई मूर्ति बेलायत प्रहरीद्वारा फिर्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
नेपालबाट हराएका दुई वटा मूर्ति बेलायतद्वारा फिर्ता
काठमाण्डाै - नेपालबाट सन् १९८० देखि १९९० को दशकमा हराएका प्राचीन मूर्तिमध्येका दुई वटा मूर्ति बेलायत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाली दूतावास लण्डनमा भएको विशेष समारोहमा बेलायत प्रहरीका तर्फबाट नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको हो । सोह्रौँ शताब्दीमा काठमा कुँदिएको कलात्मक तोरणको मूर्ति काठमाण्डौ हनुमानढोका कुमारी बहालबाट हराएको थियो । यसैगरी १८औँ शताब्दीतिर कुँदिएको घुँडा टेकेर नमस्ते मुद्रामा रहेको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाण्डौको ओमबहाल मञ्जु श्री मन्दिरबाट हराएको थियो । मूर्...
भारतले पठायो राजदूत शर्माको एग्रिमो
२ चैत, काठमाडौं । भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएका डा. शंकर शर्माको नाममा तीन महिनापछि भारतले सहमति (एग्रिमो) पठाएको छ । मंगलबार भारतले नेपाली राजदूत डा. शर्माको नाममा ‘एग्रिमो’ पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि डा. शर्मासँगै सिफारिस भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य बेलायत र श्रीधर खत्री अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त भइसकेका छन् । […]
प्रस्तावित राजदूतलाई एग्रिमो पठाउन भारतको आनाकानी, बेलायत र अमेरिकाभन्दा पनि किन ढिला ?
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यले लिए शपथ
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का लागि नेपाली आवासीय राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई शपथ गराएकी हुन् । समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालगायतको उपस्थिति थियो ।
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का लागि नेपाली आवासीय राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई राजदूतमा नियुक्त गरेकी हुन् । आचार्यलाई बेलायतको राजदूतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको थियो । बेलायतले गत साता आचार्यको एग्रिमो स्वीकृत गरेको थियो । तर, उनीसँगै गत कात्तिकमा प्रस्ताव गरिएका राजदूतहरू डा. शंकर शर्मा र श्रीधर खत्रीको एग्रिमो चाहिँ नआएको पराराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।